Bata - WoopShop ®
Tapota verenga FAQ yedu pamberi kutumira pedu shoko.
Ndezvipi zvinotengeswa pamitemo kubva kuIndaneti Shop?
Mirairo yose inonunurwa pasina mhosva uye pasina mitsara
Ndeipi nzira dzokubhadhara dzinogamuchirwa muIndaneti Shop?
Nzira dzekubhadhara dzakasiyana dzakagamuchirwa kuita kuti ruzivo rwevatengi vedu ruvepo. Iwe unogona kubhadhara neKadhipal, makadhi ekubhadharira, makadhi emakadhi, Bancontact, SOFORT, Giropay, iDeal, P24, Apple Pay, Google Pay, Chrome Payment, Mastercard, Visa, American Express, cryptocurrency kana kushandisa WoopShop yako cashback & wallet
Inguva yakareba yokutora inotora chii?
Kushanda kwemazuva ekutanga kunotora 7-20 mazuva uye mune zvisingaoneki 30 + mazuva
Iko yakachengeteka sei kutenga muIndaneti Shop? Nhamba yangu yakachengetedzwa here?
Nzvimbo yedu inoshandisa teknolojia yakachengetedzeka kwazvo kuti ivimbise kuti vatengi vedu data inodzivirirwa
Ndezvipi chaizvoizvo zvinoitika mushure mokurayira?
Iwe uchagamuchira email neyokutora yako zvese uye kana yakatumirwa iwe uchagamuchira imwe email iyo kusanganisira nhamba yekutevera nemamwe mashoko
Ndinogamuchira invoice yekuraira kwangu here?
Kana iwe uchida chero ruzivo nezve pre-kutengeswa kana mushure mekutengesa masevhisi akadai ako maamanje kuraira, nzira yekutenga, nzira dzekubhadhara, sarudzo dzekupomhodza kana kuitirana nharo, ndapota taura neWoopshop.com nekutaura chaiko kana E-mail. [Email akadzivirira] uye yedu Mutengi Service ino pindura kazhinji mukati me24 maawa.
Wholesale & Kudonhedza kutumira:
WoopShop.com is global global and supporter webhusaiti. Zvese zvigadzirwa paWoopShop zviri zvemhando yepamusoro uye zvinogona kutengeswa nemutengo wakawandisa. Kutenga online zvigadzirwa zvemafashoni kubva kuChina chinotengesa musika hazvina kumbobvira zvakadaro nyore. Kubatsira vatengesi vepamhepo uye vatengesi vezvose vanowedzera kutengesa uye kukura mabhizinesi avo, isu tinobatanidza vatengi vedu nevanogadzira pamusoro. Izvo zvakare zvakare nyore uye njodzi-yemahara kuti iwe utange rako bhizinesi nerubatsiro rweWoopShop wholesale uye uchidonhedza kutumira basa. Zvivakwa zvedu muEurope, US & Canda, Australia neChina zviri kwauri.
Nezvekutengesa uye kudonhedza kutumira basa, ndapota nyorera [Email akadzivirira]
Nokuda kwekukurukurirana kwekambani, unogona kutitaurira ne email.
WoopShop ikambani yepasi rese yekutengesa online. Neine ziso remanje zvigadzirwa zvigadzirwa uye masitayiti, tinounza iwo azvino maitiro ekutungamira maitiro anotungamira kune vatengi vedu pamitengo isingarambiki.
Isu tinotumira kune anopfuura nyika mazana maviri pasirese. Global Distribution & Warehousing inotigonesa kupa nekukurumidza kuburitsa. Kubvira pakuvambwa kwayo, WoopShop yakaona ichikurumidza kuwedzera huwandu hwezviratidzo zvebhizinesi, kusanganisira gore-kusvika-gore gosheni rekutengesa mutengo, nhamba yemirairo, vatengi vakanyoreswa uye vatengesi, uye zvinyorwa.
WoopShop inopa dzakasiyana-siyana zvigadzirwa: zvevakadzi uye zvevakadzi zvipfeko, shangu, mabhegi, zvishongedzo, zvipfeko, nguo dzinokosha dzekupfeka, runako, kushongedzwa kwemba uye zvichingodaro.
Yedu yepamutemo webhusaiti WoopShop.com inowanikwa mumitauro yese, seFrançais Español Deutsch, Italian, Arabic etc. WoopShop iri kupa vatengi nzira iri nyore yekutenga sarudzo yakasarudzika yehupenyu zvigadzirwa pamitengo inoratidzika.
Iine hunhu hwakanakisa hwekununurwa kwenyika dzese, tinogona kuunganidza zvigadzirwa zvepamusoro uye nekupa zviri nani uye nekukurumidza zvemitemo yekutengesa vatengi vedu vatengi.
Tsvaga mutauro Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Chiberaruzi Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Chakarerutswa) Chinese (Traditional) ChiCroatian Czech Danish Dutch Chirungu Esperanto Estonian omuPhilippines Finnish French Galician rechiGeorgian German ChiGiriki Gujarati Haitian Creole Hausa Hebrew Hindi ChiHmong Hungary Icelandic Igbo Indonesian Irish Italian Japanese ChiJavanese Kannada Kazakh Khmer korean Lao Latin wokuLatvia Ritunia Macedonian Malagasy ChiMalay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Myanmar (Burma) Nepali Norwegian Persian poricha Portuguese Punjabi Romanian Russian ChiSebhiya Sesotho Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sundanese Swahili Swedish Tajik Tamil Telugu Thai Turkish Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Yiddish Yoruba Zulu
Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Chiberaruzi Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Chakarerutswa) Chinese (Traditional) ChiCroatian Czech Danish Dutch Chirungu Esperanto Estonian omuPhilippines Finnish French Galician rechiGeorgian German ChiGiriki Gujarati Haitian Creole Hausa Hebrew Hindi ChiHmong Hungary Icelandic Igbo Indonesian Irish Italian Japanese ChiJavanese Kannada Kazakh Khmer korean Lao Latin wokuLatvia Ritunia Macedonian Malagasy ChiMalay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Myanmar (Burma) Nepali Norwegian Persian poricha Portuguese Punjabi Romanian Russian ChiSebhiya Sesotho Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sundanese Swahili Swedish Tajik Tamil Telugu Thai Turkish Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Yiddish Yoruba Zulu
Nheyo-ku-kutaura mitauro inogumira kune vanhu vane 200
Options : History : Feedback : dhoneta pedyo